Etu ị ga - esi tọghata na - eduga n’ahịa | ECommerce ozi ọma
ECommerce ozi ọma
Otu esi agbanwe ndu na ere ahia
Susana Maria Urbano Mateos | | Ahịa ahia
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndu agaghị agbanwe na ahịa na-akpaghị aka, ya mere ha ga-achọ enyemaka ọzọ. Enwere ụfọdụ ihe enwere ike ịme iji gbanwee ndị niile nwere ike ịga ahịa Ecommerce gị.
2 Nwee akwukwọ Ajụjụ mara mma
3 Kọwaa oke oge
5 Email ahịa
Ndị mmadụ dị ka free stof na Ya mere ihe mfe na ngwa ngwa ụzọ Iji gbanwee onye nwere ike ịzụ ahịa bụ ịnye ha onyinye ma ọ bụ nye ha ego pụrụ iche maka ịbụ ihe mbụ ha zụrụ. Ego a ekwesịghị ịbụ oke ma ọ bụ ọnụ ahịa dị elu, naanị onyinye na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ mbelata oge pere mpe.
Nwee akwukwọ Ajụjụ mara mma
Ọtụtụ ndị ahịa nwere ike anaghị agbanwe ahịa n'ihi na ha enweghị ike ịchọta azịza nye ajụjụ ha. Ya mere, ọ bụrụ na enwere nnukwu Ajụjụ Ajụjụ Ndị Na-ajụkarị, onye ahịa ahụ ga-enwe ozi dị mkpa iji mee mkpebi ịzụta ngwaahịa ahụ.
Kọwaa oke oge
Mepụta a Oge imechi iji kpochapụ nkwukọrịta ọ bụla yana onye ahịa ahụ, ọ bụkwa ezigbo ụzọ iji kpalie ha ịzụta. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike izipu ozi email na-ekwu na ha anụbeghị ya n'ime ụbọchị 30 yana ozi a bụ nkwukọrịta ikpeazụ. Ọ na - abụkarị nke a na - akpalite mmeghachi omume na onye ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ ọ na - egbochi ọnwụ nke oge ndị otu ahịa.
Email ngwa ngwa ma ọ bụ oku ekwentị Jụ ndị ahịa nwere ike ịnwe ma ọ bụrụ na ha nwere ajụjụ ndị ọzọ na-akpalikarị nzaghachi ịzụ ahịa. Ọ bụ ụzọ dị irè iji gbanwee ngwa ngwa na-eduga n'ime ahịa tupu oge agafe.
N'ikpeazụ, anyị agaghị echefu na ozi ahia okwesiri iguzo ma ghara ilekwasi anya na ahia ma obu nkwado. Ọ bụ ezigbo echiche iji dọta uche nke ndị ahịa nwere ike ịmata ihe gbasara ụlọ ọrụ ma ọ bụ uru ngwaahịa, ya bụ, ozi na-ewepụta mmasị ha ma mee ka ha laghachi na saịtị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Otu esi agbanwe ndu na ere ahia
Gịnị bụ ahịa akpaaka?
Kedu uru nke igwe ojii na-eweta ntanetị